Microsoft waxay abuurtaa nooc khaas ah Windows 10 oo leh gadaal loogu talagalay Shiinaha | Wararka IPhone
Microsoft waxay abuurtaa nooc gaar ah Windows 10 oo leh gadaal u ah Shiinaha
Tan iyo markii muranka FBI iyo Apple uu bilaabmay si kuwa ka socda Cupertino ay furaan aaladda isla markaana ay awood ugu yeeshaan inay helaan waxa ku jira, wax badan ayaa laga sheegay dalabka dowladda Mareykanka. inay Apple u qaabeeyaan nidaam hawlgal oo laga mari karo albaabka dambe. Bilowgii Apple marwalba way diidday, maahan inay mucaarad ku tahay dowladda, laakiin waxay u noqon kartaa god ay ku dhacaan dhammaan dadkaas saaxiibbada la ah kuwa kale ee ka xadi kara macluumaadka shaqsiyeed aaladdayada.
Apple ayaa sii wadi doonta inay diido inay sameysato bannaanka hore, taasoo ku qasbeysa FBI inay yeelato maciinsashada habab kale si aad awood ugu yeelatid inaad hesho macluumaadka ku kaydsan qalabka, sidaan horeyba kuugu sheegnay kiiska IPhone 5c ee ay adeegsadeen argagixisada weeraradii San Bernardino. Laakiin waxay u muuqataa in inta Apple diidan tahay, ay jiraan shirkado kale oo arrinta asturnaanta aysan iyaga khusayn oo Microsoft ay tusaale cad u tahay.
In kasta oo Apple diido oo ay sii wadi doonto diidmada in loo sameeyo GovtOS dowladdu si xor ah ugu hesho aaladaha iOS, Shirkadda Microsoft ayaa heshiis la gashay dowladda Shiinaha, in loo sameeyo nooc gaar ah Windows 10 suuqyada dalkaas. noocani oo loo yaqaan 'Zhuangongban', waxaa ku jira "xakameyn weyn oo xagga amniga ah".
Inkasta oo sida caadiga ah Microsoft aysan aqoonsaneyn xaqiiqda, daabacaadda TNW waxay sheegeysaa in isbeddeladan lagu soo bandhigay codsi ka yimid mas'uuliyiinta Shiinaha, si ugu xakameyso si wax ku ool ah dhammaan muwaadiniinteeda. Waa in la xasuusnaadaa, sida Ruushka, Shiinaha inay leeyihiin dhowr waaxood oo mas'uul ka ah xakamaynta dhammaan macluumaadka laga yaabo ama laga yaabo inay ku dhex wareegaan waddanka internetka. Iyadoo aan la sii dhaafin, Facebook, Twitter iyo shirkado kale kama shaqeyn karaan dalka xayiraadahaas awgood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Microsoft waxay abuurtaa nooc gaar ah Windows 10 oo leh gadaal u ah Shiinaha
Nabadeey Ignacio. Waxaan ku aqriyay warkan dhowr bog sida ay sheegeyso waa xan, waxaan fahansanahay in cidina aysan xaqiijin in Microsoft runti ay soosaartay noocyadan OS, laga yaabee inaysan sax noqoneyn in xaqiiqda loo sheego mooyee Microsoft ama Shiinaha masuuliyiintu way xaqiijiyeen (waana fahamsanahay inaysan xaqiijin).
Sidee loo joojiyaa helitaanka wicitaanka ipadka iyo aaladaha kale markay nagula soo hadlaan iPhone
Apple waxay soo bandhigi doontaa isku dheelitirkeeda seddexdii biloodba mar Abriil 25